किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा - Mitho Khabar
June 25, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा
बिहेमा गएका श्रीमान फर्केर घरमा आउदा कोठामा श्रीमती यस्तो हालत मा, के भएछ तेस्तो?
प्याजको सेवन धेरै गर्नुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् प्याजले निम्त्याउँछ यस्ता समस्या